Zimbabwe International Trade Fair held in Bulawayo-Xinhua
Zimbabwe International Trade Fair held in Bulawayo
Zhu Wei, leader of the Chinese medical team in Zimbabwe, works at the Traditional Chinese Medicine's stand at the Zimbabwe International Trade Fair in Bulawayo, Zimbabwe, on April 29, 2022. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Friday urged local industry and businesses to adopt new business models and innovative strategies to raise productivity and boost competitiveness. Mnangagwa made the remarks while officially opening the 62nd edition of the Zimbabwe International Trade Fair (ZITF) in Bulawayo. (Photo by Shaun Jusa/Xinhua)
An exhibitor speaks to a visitor at the Zimbabwe International Trade Fair in Bulawayo, Zimbabwe, on April 29, 2022. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Friday urged local industry and businesses to adopt new business models and innovative strategies to raise productivity and boost competitiveness. Mnangagwa made the remarks while officially opening the 62nd edition of the Zimbabwe International Trade Fair (ZITF) in Bulawayo. (Photo by Shaun Jusa/Xinhua)
Sikhangezomuhle Somali, co-founder and administrator of Millennium Footwear, a local company that specializes in exotic leather footwear, shows her company's products at the Zimbabwe International Trade Fair in Bulawayo, Zimbabwe, on April 29, 2022. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Friday urged local industry and businesses to adopt new business models and innovative strategies to raise productivity and boost competitiveness. Mnangagwa made the remarks while officially opening the 62nd edition of the Zimbabwe International Trade Fair (ZITF) in Bulawayo. (Photo by Shaun Jusa/Xinhua)
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa (2nd L, Front) visits the Belarus' stand at the Zimbabwe International Trade Fair in Bulawayo, Zimbabwe, on April 29, 2022. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Friday urged local industry and businesses to adopt new business models and innovative strategies to raise productivity and boost competitiveness. Mnangagwa made the remarks while officially opening the 62nd edition of the Zimbabwe International Trade Fair (ZITF) in Bulawayo. (Photo by Shaun Jusa/Xinhua)